ငါဘယ်လိုတစ်ခု admin ရဲ့ password ကိုဘဲငါရဲ့ PC သို့ရနိုငျ? - သတင်း Rule
ငါဘယ်လိုတစ်ခု admin ရဲ့ password ကိုဘဲငါရဲ့ PC သို့ရနိုငျ?
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ငါဘယ်လိုတစ်ခု admin ရဲ့ password ကိုဘဲငါရဲ့ PC သို့ရနိုငျ?” ဂျက် Schofield ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့6သြဂုတ်လအပေါ်များအတွက် 2015 09.27 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ငါက Microsoft က Windows ပြေးတစ်ဦး HP က Laptop ကိုရှိ 8. များစွာသောသတင်းရင်းမြစ်များကအကြံပြုထားသကဲ့သို့, ငါသည်ငါ့ဇနီးနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့သီးခြားအသုံးပြုသူအကောင့်ဖန်တီး, ငါခဏ admin ရဲ့အဖြစ် log ဖို့လိုအပ်ပြီမဟုတ်. ယခုငါရိုးရိုးလေးစကားဝှက်ကိုမေ့လျော့ကြပြီ. ငါသိသာမူကွဲ၏အားလုံးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်, သောငါသည်ငါ့အဟောင်း iMac အတွက်အသုံးပြုတဲ့ပုံစံနောက်တော်သို့လိုက်. ငါသည်လည်းအွန်လိုင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့အချို့ဖြစ်စဉ်များကြိုးစားခဲ့ပါတယ်, အဘယ်သူမျှမအောင်မြင်မှုနှင့်အတူ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကို back up လုပ်ထားဖို့လုံလောက်တဲ့လွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်, ဒါကြောင့်လဲကျနော်တစ်ဦးစက်ရုံတည်ဆောက်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပြီ, ဒါပေမယ့်ငါကတစ် admin ရဲ့ password ကိုတောင်းသွားအချို့သောဖြစ်ကြောင်းကို. ငါပြုပြီမဟုတ်သည့်သိသာအရာအချို့စီးပွားဖြစ်လောင်သောအသံဆော့ဖ်ဝဲပေးဆောင်ဖြစ်ပါသည်, ငါမူကားအရာမျှမစိတ်ကူးရှိသည် (ရှိလျှင်) ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့နှင့်ထိရောက်သောများမှာ. အဖြေတစ်ခုအကြံပြုပေးပါ, ငါက Windows မှအဆင့်မြှင့်တင်ချင်ပါတယ်အဖြစ် 10. စတီဖင်
သင်သည်သင်၏ MSA ကိုအဖြစ် Microsoft ကအီးမေးလ်လိပ်စာသုံးပြီးမူရင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအကောင့်ကို set up ခဲ့ (Microsoft ကအကောင့်ကို), ငါပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုပါသည်အဘယျအရာဖြစ်ပါသည်? ဒါကြောင့် အကယ်., သင့်ရဲ့ logon password ကိုသင့်ရဲ့အီးမေးလ်စကားဝှက်ကိုအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဤသင်ဆဲသတိရစေခြင်းငှါ, အရာတစ်ခုခုသည်. သင်ပင်တစ်နေရာရာကဆငျးသကျရေးထားပြီစေခြင်းငှါ,.
သင်တစ်ဦး, Hotmail ကိုသုံးခဲ့ပါက, Live သို့မဟုတ် Outlook.com account ကို, သင်သည်သင်၏ admin ရဲ့အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့၏ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းများ, အထဲကနေသင့်အီးမေးလ်အကောင့် password ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် Microsoft ကအကောင့် Password ကို Reset စာမျက်နှာ. ရှိပါတယ် step-by-ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက် About.com မှာ.
သင့်ရဲ့ PC ကို Microsoft ကသင့်ရဲ့ Laptop ကိုအပေါ် admin ရဲ့ password ကို update လုပ်နိုင်အောင်အွန်လိုင်းဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်. သို့သော်, သင်သည်သင်၏စံအကောင့်ကနေ password ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းလျှင်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်သိသာအွန်လိုင်းဖွစျလိမျ့မညျ.
သင့်ရဲ့ PC ကို Reset
နောက်ထပ်အိုင်ဒီယာသင့်ရဲ့ဒေတာကို back up ပြီးတော့စက်ရုံအခွအေနေရန်သင့် PC ကို reset ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ဤအချက်များအားလုံးနှင့် Windows ပေါ်မှာဖြစ်နိုင်သောဖြစ်သင့် 8 ဆဲသူတို့၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး partition ကိုနဂိုအတိုင်းရှိသည်သောကွန်ပျူတာများ. ဒါဟာအစက Windows နဲ့အလုပ်လုပ် 10 PC များ. ဤရွေ့ကားတစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး partition ကိုမရှိဘူး, ဒါပေမဲ့သူတို့လိုအပ်သည့်အခါ operating system ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဘို့အထူးစနစ်ကရှိ.
ကံမကောင်းသဖြင့်, ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦးက Windows ကို reset နိုင်မစဉ်းစားကြဘူး 8 တစ်ဦးစံအသုံးပြုသူအကောင့်မှ PC ကို. သင်ပင်က Windows ပေါ်မှာစံအကောင့်မှ "ငါ့ PC ကို Reset" မမွငျနိုငျ 10, နှင့်သူချင်းသတင်းစာဆရာရှိမုနျကို Bisson ဒီလည်း Windows ပေါ်မှာအမှုဖြစ်ခဲ့သည်ကိုအတည်ပြု 8.1. (Windows ကိုမှကျေးဇူးတင်ပါသည် 10, ငါက Windows ထဲကယာယီတာ 8 PC များ။)
အ admin ရဲ့အကောင့်ကိုထိန်းချုပ်ရရှိသွားတဲ့ရှေ့တော်၌က Windows admin ရဲ့စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၏အခြားနည်းလမ်းများနောက်ဆုံးမှာ hard drive ပေါ်တွင်ဖိုင်တွေပြောင်းလဲနေတဲ့ဆင်းပြုတ်. အစဉ်အလာချဉ်းကပ် startup sequence ကိုနှောက်ယှက်ဖို့ဖြစ်တယ်, သင်မူကားလည်းသင်၏ Windows ပြန်လည်ထူထောင်ရေး DVD ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး bootable USB thumb drive ကနေသင့်ရဲ့ PC ကို restart လုပ်ပါနိုင်. နောက်ထပ်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ဦး "Live CD" သို့မဟုတ် USB drive ကမှ Linux ကို load ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ငါသည်ဤပုံကိုအများဆုံးစီးပွားဖြစ် "cracking" အစီအစဉ်များကိုအလုပ်ဖြစ်ပါသည်သံသယ.
အဆင့်မြင့် Startup Options ကို
အများစုကဂျက်စာဖတ်သူတွေ function တစ်ခု key ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးကို Windows PC ကွန်ပျူတာများ၏ Bo​​ot တက် sequence ကိုကြားဖြတ်နှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမေး, ပြီးတော့ဘေးကင်းလုံခြုံ mode မှာ Windows ကစတင်ပြီးဒါမှမဟုတ်အတွင်း Boot တက်အမိန့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ BIOS ကို (Basic Input / Output System) chip ကို. Windows ကို 8 နဲ့ Windows 10 PC များမရှိတော့အလွန်အဟောင်းနှင့်နှေးကွေး BIOS ကိုအသုံးပွုရ, သူတို့ကိုသုံး UEFI တစ်ဦးကို Advanced Startup Options ကိုနှင့်အတူ (ASO) ဖန်သားပြင်.
အများစုက PC များအယူအဆထိန်းသိမ်းထားပြီ, ဒါကြောင့်ကိုနှိပ်,ပွောဆို, Windows အကာလအတွင်း F11 Key ကိုသို့မဟုတ် Esc 8 Boot တက် sequence ကိုအ ASO မျက်နှာပြင်ရန်သင့်အားကြာမြင့်မည်, သင်တစ်ဦး command prompt ကိုပြတင်းပေါက်စတင်နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ (cmd.exe) ခေါ် "DOS ကိုသေတ္တာ". သင့်ရဲ့ HP က Laptop ကိုများအတွက်အသုံးပြုသူလမ်းညွှန် Check (သင့် hard drive ကိုသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းပေါ်) စာနယ်ဇင်းမှအဓိကသော့ချက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအရာမြင်ဖို့.
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, သငျသညျတနျခိုး icon ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းနေစဉ်ပြောင်းကုန်ပြီ key ကိုနှိမ့်ချကိုင်ဆောင်နှင့် Restart ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် ASO မျက်နှာပြင်မှရနိုင်. အဆိုပါရှည် Wind အခြားရွေးချယ်စရာက Settings ကိုရွေးချယ်ပါရန် Charm bar ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ပြောင်းလဲမှုကို PC settings ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ထို့နောက်အဆင့်မြင့် Startup စာမျက်နှာ option ကိုမှ Recovery ကိုဖြတ်သန်းသွား, "ယခု Restart".
သင် ASO စာမျက်နှာမှရလာတဲ့အခါ, သမျှကိုလမ်းကြောင်းအားဖြင့်, Troubleshoot ကို select လုပ်ပါ, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ PC ကို Reset. ဒီစက်ရုံမှာအခြေအနေကြောင့်ပြန်သင့်.
ဝမ်းနည်းစရာ, ငါကတစ် admin ရဲ့ password ကိုမပါဘဲတစ်ဦးမှပြန်လည်စတင်ပွုပါမညျမသေချာဘူး - ငါကြိုးစားရန်စက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး - ဒါပေမယ့်တစ်သွားလာရင်းတန်ဖိုးရှိင်. (တစ်ဦးက Windows ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသောအခါငါစကားဝှက်ကိုတောင်းခဲ့ဖူးဘူး 8 PC ကွန်ပျူတာ, ငါမူကားအစဉ်မပြတ်ငါ admin ရဲ့အကောင့်ကနေအမှုကိုစီရင်င်သံသယ။)
သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးကို Windows DVD ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး bootable USB thumb drive ကနေသင့်ရဲ့ Laptop ကိုစတင်ထို့နောက် hard drive ပေါ်တွင်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်. အကောင်းဆုံးကတော့, Windows ကိုသင်ကအဓိကပြဿနာသို့ပွေးလေ၏အမှု၌ဖန်တီးအကြံပြုသောပြန်လည်ထူထောင်ရေး DVD ကိုအသုံးပွုရ. (ဒါပေါ့, သငျသညျမြား၏တဦးတည်းရှိပါက, သင်ရုံ Windows ကို reinstall နိုင် 8 ခြစ်ရာကနေ။)
အကယ်. မ, တကယ့်သင်မှ boot အဘယျသို့အရေးမပါဘူး, သင် operating system ကို install လုပ်မယ့်မင့်သောကြောင့်,. ဒါဟာနီးပါးမည်သည့် Windows ကို DVD ဒါမှမဟုတ်တစ်တိုက်ရိုက် Linux ကို CD ကိုဖြစ်နိုင်.
သင့်အနေဖြင့်ငြိမ်ဝပ်-of-files တွေကို access တယောက်အမည်ပြောင်းအားဖြင့် "ချိုး". ရရှိနိုင်တစ်ဝက်တစ်ဒါဇင်ရှိပါတယ်, sethc.exe အပါအဝင် (High Contrast Set), utilman.exe (utility Manager ကို), နှင့် osk.exe (on-Screen ကို Keyboard ကို). သငျသညျအလုပျလုပျကရပ်တန့်ဖို့အဲဒီထဲကအမည်ပြောင်း: ဥပမာအားဖြင့်, osk.exe.old မှ osk.exe အမည်ပြောင်း. ပြီးနောက်, သငျသညျ cmd.exe မှ osk.exe ဖို့စစ်ဌာနချုပ် shell ကိုအမည်ပြောင်း (သို့မဟုတ်ကိုမဆိုဖိုင်သင်တို့ကိုရွေးကောက်).
အခုတော့, အကယ်. သင်သည် Windows စ​​တင်သောအခါအ 8, သင် utilities icon ကိုမှ on-screen ကိုကီးဘုတ် run နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် command ကို shell ကိုအစား load လိမ့်မည်. ဤသည်သင်တစ်ဦးစကားဝှက်အသစ် assign ပေးနိုင်ပါတယ် (ဥပမာ 123) သင့်ရဲ့ admin ရဲ့အကောင့်ကို, သင်၌ log နိုင်အောင်. (နောက်ကျော osk.exe မှ cmd.exe နဲ့ osk.exe.old မှ osk.exe အမည်ပြောင်းအားဖြင့်ကို clean up ဖို့သတိရပါ, သစ်နှင့်စကားဝှက်ကိုထားကြ၏။)
YouTube ဗီဒီယိုအများကြီးပြုင်ဘယ်လိုပြသ. ငါတွေ့ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးတယောက်ယ်စလီသည်ဒါဝိဒ်၏ဖြစ်ပါသည် တစ်ဦး backdoors မှတဆင့်တစ်ဦးကို Windows Password ကို Reset လုပ်နည်း. သူကအရမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်.
သင်တစ်ဦးကို Linux-based "ကယ်ဆယ်ရေး CD ကို" ကြိုးစားရန်လိုလျှင်ထို့နောက်မှာကြည့် သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကယ်ဆယ်ရေး Kit နှင့် Ophcrack v3.6.0 (LiveCD v3.6.0). နှစ်ဦးစလုံးအခမဲ့.
သင်တစ်ဦးလစာသည် cracker ကြိုးစားရန်လိုပါလျှင်, Windows ကို Password ကို Key ကို တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်အလောင်းအစားကြည့်. ငါကကြိုးစားခဲ့မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့် website ကိုကောင်းစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးရှိပါတယ် သင်ခန်းစာ, ပြီးနောက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစင်တာ ဆောင်းပါးတွေသံကိုဖြစ်ကြသည်. Windows ကို Password ကို Key ကိုအခမဲ့ download ပေမဲ့, ငါသည်သင်တို့ကိုပေးဆောင်တက်အဆုံးသတ်ယူဆ .95, ငါဘယ်လောက်မသိသော်လည်း.
ပထမဦးဆုံးဌာန၌ဤအခြေအနေသို့ရတဲ့ရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းများရှိပါသည်. ငါသည်တရှည်လျားသောစကားဝှက်နဲ့တစ်ဦး Microsoft ကအီးမေးလ်လိပ်စာကိုသုံး, ငါသည်အလျင်အမြန်အတွက် log နိုင်အောင်ငါမူကားတစ်ဦး 4-ဂဏန်း PIN နံပါတ်ကို set up. ငါနှစ်ခု admin ရဲ့အကောင့်လည်းရှိ, အမှု၌သူတို့ကိုတယောက်မကောင်းတဲ့ဝင်. နောက်ဆုံး, ငါ Microsoft ကသငျသညျမှခွင့်ပြုသတိပြုပါ စကားဝှက်ပြန်ညှိ disk ကိုဖန်တီး (ဒါမှမဟုတ် USB thumb drive သို့မဟုတ် floppy disk ကို) သင်ကမေ့လျော့တော်လျှင်သင်သည်သင်၏ password ကို reset နိုင်အောင်. ဒါဟာသင်လမ်းပြတစ်ဦး wizard ကိုအတူရိုးရှင်းတဲ့ menu ကိုကို item င်. Windows ကို 8.1 ထိုနညျးတူအလုပ်ဖြစ်တယ်.
သင့် hard drive ကိုပျက်ကွက်လျှင်သင်တို့သည်လည်းဒါကြောင့်ပြန်လည်နာလန်ထူမီဒီယာနှင့်ပြန်-ups ဖန်တီးရန် Windows ရဲ့လမ်းညွန်အတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်, သငျသညျခြစ်ရာကနေ Windows ကို reinstall ပြန်သင့်ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယရနိုင်.
32204	0 အပိုဒ်, ဂျက်မေးပါ, ဂျက် Schofield, Microsoft က, Software များ, နည်းပညာ, Windows ကို, Windows ကို 10, Windows ကို 8
← မှန်မှန် 'အဆေးလုံးကိုယူပြီးကင်ဆာရောဂါနှစ်မျိုးနှစ်ပုံစံများကိုကာကွယ်တားဆီးကူညီပေးသည်’ အသုံးပြုမှုပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်များစွာ Motorola က Moto G (3တတိယအကြိမ်မြောက်ဗိုလ်ချုပ်) ဆန်းစစ်ခြင်း →